केक बोक्ने हेलिकोप्टरले सल्यानकी कल्पनालाई किन बोक्न सकेन ! « Farakkon
केक बोक्ने हेलिकोप्टरले सल्यानकी कल्पनालाई किन बोक्न सकेन !
दाङ,फागुन १४ । सल्यानमा भिरवाट लडेर घाइते भएकी एक युवतीको समयमै राम्रो उपचार नपाउँदा मृत्यु भएको छ । माघ ४ गते शारदा नगरपालिका–८ निवासी २१ वर्षीया कल्पना आचार्य स्याउला झार्ने भनि रुखमा चढेको समयमा लड्न पुग्दा गम्भीर घाइते भएकी थिइन । उनलाई उद्धारगरि जिल्ला अस्पताल खलंगा पुर्याईको भएपनि त्यहाँ उपचार संभव भएन ।
चिकित्सकले तत्काल हेलिकोप्टरवाट उद्धार गरेर काठमान्डौं लैजान सmुभाएका थिए । एम्वुलेन्सवाट लैजाँदा बाटोमै मृत्यु हुन सक्ने खतरापनि चिकित्सकले औंल्याइदिएका थिए ।
तर घाइते आचार्यको उद्धारका लागि हेलिकोप्टर समयमै आएन । कागजी प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै १८ घन्टाजति वित्यो । बेलुकी पख हेलिकोप्टर उड्न नमाने र घाइते आचार्यको मृत्यु भयो । केही दिन पहिले मात्रै हाम्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो जन्मउत्सव मनाउन केक बोकेर हेलिकोप्टरमा उडेका थिए ।माघ २९ गते मात्रै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सल्यान जिल्लाको श्रीनगरमा संचालित प्रादेशिक महोत्सवको उद्घाटन गर्न हेलिकप्टर चार्टर गरेर आएका थिए ।
सल्यान उद्योग वाणिज्य संघले माघ २९ गतेदेखि फागुन ११ गतेसम्म महोत्सव लगाएको थियो ।हाम्रो नेपाल यस्तै छ, यहाँ विरामीको उद्धार गर्न हेलिकोप्टर आउन कागजी प्रक्रिया मिलाउनु पर्छ तर उच्च ओहादाका व्यक्तिहरुलाई भने बर्थ डे केक बोक्न र महोत्सव उद्घाटन गर्न कुनै कागज मिलाउनु पर्दैन । यही तथ्यलाई कल्पाना आचार्यका दाजु शिद्धार्थ गौतमले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा बहिनीको मृत्यु पछि उल्लेख गरेका छन् । जसले देशका शासक र जनताको अवस्थाको सही रुपमा चित्रण गरेको छ । कल्पाना आचार्यका दाजु नाता पर्ने सिद्धार्थ गौतमले सामाजिक सञ्जालमा बहिनीको मृत्यु पछि लखेको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै ।
बिडम्बना ! सबैले चाहदाचाहदै, बच्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि राज्यले एउटा नागरिक बचाउन सकेन । राज्यका अङ्गहरु परिचालित हुँदाहुँदै पनि एउटा मिसन पुरा हुनसकेन ।
तत्काल र निरन्तर गर्नुपर्ने कुरामा पनि हाम्रो राज्य सम्यन्त्र किन प्यारालाइज्ड देखिन्छ ? यी कागजी प्रकृया र भनसुनबाहेक नागरिकले तत्काल सेवा पाउने अर्को संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने हो कि ? राज्य संयन्त्र निर्दे्सित मात्र देखियो, यसलाइ उत्तरदायी र मानवीय बनाउन ढिलो हुँदै छ कि ? तिमी यस्तो देश मा जन्म लिएकी थियौ जहाँ केक बोक्न हेलिकप्टर प्रयोग गरिन्छ तर बिरामी बोक्न सम्पूर्ण कागजात तयार गर्दा नि उडाउन मिल्दैन । माफ गर बहिनी ।